Wax walba aad doneyso in aad ka ogaato kulanka adag ee Hungary iyo Portugal | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Wax walba aad doneyso in aad ka ogaato kulanka adag ee Hungary iyo Portugal
Wax walba aad doneyso in aad ka ogaato kulanka adag ee Hungary iyo Portugal
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 22-06-16 7:34 AM Portugal ayaa kulanki ugu dambeeya Group F waxay Magaalada Lyon kula kulmi doonaan dalka Hungary iyagoo u baahan guul si ugu soo baxaan wareega 16-ka.
– Attila Fiola ayaa ka maqnaa kulanki ay 1-1 ay la galeen Iceland dhaawacuu canqawga ka qabay awgii ,waxaana dadabka midig shaki la gelinayaa kulanka ugu dambeeya wareega Group-ka oo ayPortugal la dheeli doonaan.
Bernd Storck ayaanan wax kabadali doonin shaxdiisa sabtidii barbara keentay waxaase macquul ah inuu ciyaaro qaab ciyaareedka 4-1-4-1 taasoo ay cadaadis xoogan ku saaareen kulani furtaanka dalka Austaria.
-Raphael Guerreiro iyo Andre Gomes ayaa tababarka ku seegay dhaawacyo waxaana shaki lagelinayaa in ay ciyaaraan kulanka Hungary , Eliseu ayaa buuxin doona booska Guerreiro, halka uu Renato Sanches safka hore kusoo bilaaban karo.
Waa kulanki 11-aad oo ay labada dhan kulmaan; Portugal ayaan weli dhadhamin guuldaro kasoo gaarta Hungary 7 guul iyo sadex barbaro ay gaareen.
Hungary ayaa ku hungowday in ay gool ka dhaliyaan Portugal sadexdi kulan ee ugu dambeysay 328 daqiiqo Portugal ayaana dhalisay 10 gool.
Labada dal ayaa hal jeer oo qura ku kulmay tartamada caalamiga Portugal ayaa 3-1 ku adkaatay koobkii aduunka 1966 ciyaarihii lagu qabtay ingiriiska.
Portugal ayaan laga adkaan 9 kulan ee u dambeeyay tartamada iyagoo 7 kamid ah oo ay guuleysteen kaliya hal gool dhaliyay.
Haddii uu Ronaldo ciyaaro waxay u noqoneysaa kulankiisi 30 ee tartamada caalamiga uu u safto Portugal isagoo ka sareeya ciyaryahanka kasta ee Portugal ah waxuuna dhaliyay 9 gool.
Waa marki ugu horeysay oo ay Hungary Euro ciyaarto tan iyo markii heerka Group-ka loo sameeyay , waxayna ku hungoobeen in ay wareega Group-ka kasoo baxaan koobabkii aduunka (1978, 1982 & 1986).
Portugal ayaanan marnaba ku hungoobin in ay kasoo baxaanwareega Group-ka lixda jeer ee ay kasoo qeyb galeen koobka qaramada qaaradda yurub.
Haddii uu Calaamada jaalaha qaataan waxay seegayaan kulanka xiga Kádár, Kleinheisler, Nagy, Németh
Gegida: Stade de Lyon – Lyon